चितुवाको आक्रमणबाट मृत्यु भएका बालकका परिवारलाई राहत दिन मन्त्री पुगे गाँउमै ! – ebaglung.com
२०७५ असार २८, बिहीबार ०८:२५	Top News, थप समाचार
माधब पराजुली, पोखरा २०७५ असार २८ । चितुवाको आक्रमणबाट मृत्यु भएका तनहुँको भानु नगरपालिका वडा नं. ३ स्थित तिनकुने टोलका ६ बर्षीय बालक बिशाल श्रेष्ठका परिवारलाई सरकारले आर्थिक सहयोग गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालले बुधवार गाँउमै पुगेर मृतक बालकका बुवा वीरेन्द्र श्रेष्ठ र आमा रुपा श्रेष्ठलाई नगद रु. १० लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेका छन् । मन्त्री लम्सालले घटनाप्रति दुख व्यक्त गर्दै घर परिवारलाई सान्त्वना प्रदान गर्न सरकार गाँउ घरमै आएको बताए ।
पछील्लो समय मानव र वन्य जन्तुको व्दन्व्द चरम रुपमा बढ्दै जान थालेको र यस समस्याको निर्मुल पार्ने कार्यलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए । मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न बहन क्षमताका आधारमा व्यवस्थापन, राहत वितरणमा प्रभावकारिता र समस्याग्रस्त वन्यजन्तुको व्यवस्थापनमा प्रभावकारिता ल्याइने उनको भनाई थियो ।
सो अवसरमा सचिब डा.बुद्धी सागर पौडेलले मृतकका परिवारलाई तत्काल राहत स्वरुपको रकम दिने पहल थालेपनी प्रक्रिया लामो हुन पुग्दा ४ महिना ढिला हुन पुगेको जानकारी दिए ।
सोही अवसरमा भानु नगरपालिकाले वालकका परिवार लाई रु.२५ हजार नगद सहायोग गरेको छ । नगरपालिकाको तर्फ बाट २५ हजार रकम प्रदान गर्दै मेयर उदयराज गौरीले मृतक विशालका भाईलाई कक्षा १० सम्म अध्ययन गर्दा लाग्ने रकम सबै आफुले व्यक्तिगत व्योहोर्ने उद्घोष गरे ।
गत फागुन १ गते शिवरात्रिको दिन मामाघर जादै गरेका बालक श्रेष्ठलाई चितुवाले साँझ ६ बजे आक्रमण गरेको थियो । बालकलाई खोज्ने क्रममा गाँउलेले आक्रमण गरेको स्थान देखी २०० मिटर तल जंगलमा लगेर बालकलाई चितुवाले खाएको अवस्थामा फेला पारेका थिए ।